FAQs - Changzhou Hollysen टेक्नोलोजी ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
के तपाइँ तपाइँको ग्राहक लाई नमूनाहरु प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हो हामी सक्छौ। हामी स्टक मा नमूना प्रदान गर्न सक्छौं। र ग्राहक नमूना र कुरियर लागत को लागी तिर्नु पर्छ।
तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरु को गुणवत्ता को ग्यारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ?
हामी हाम्रो आफ्नै प्रयोगशाला छ र सबै उत्पादनहरु १००% डेलिभरी भन्दा पहिले निरीक्षण गरीरहेका छन्। हाम्रा सबै प्रक्रियाहरु IATF16949 प्रक्रियाहरु लाई कडाईका साथ पालन गर्दछन्। र जे होस्, हामी BL मुद्दा मिति बाट १ बर्ष वारेन्टी छ यदि तपाइँ उचित तरीकाले हाम्रो उत्पादन को उपयोग गर्नुहुन्छ।
के तपाइँ अनुकूलित सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, यदि तपाइँ हाम्रो श्रेणी मा आवश्यक सामान पाउन सक्नुहुन्न, तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, र हाम्रो पेशेवर आर एन्ड डी टीम एसी कम्प्रेसर तपाइँको लागी विशेष गरी डिजाइन गरीनेछ।
कसरी तपाइँको वितरण समय को बारे मा?
सब भन्दा छिटो डेलिभरी समय १० दिन हो र औसत डेलिभरी समय ३० दिन पछि तपाइँ पुष्टि गर्नुहुन्छ।
तपाइँको वितरण को शर्तहरु के हो?
यदि मेरो अर्डर कहिल्यै आएन भने म के गर्ने?
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँका सबै आदेशहरु पहिले नै पठाइएको छ। यदि तपाइँको अर्डर ट्र्याकि website वेबसाइट मा तपाइँको प्याकेज प्रदर्शित गरीएको छ, र तपाइँ यसलाई २ हप्ता मा प्राप्त गर्नुहुन्न; सहायता को लागी ग्राहक सेवा लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाइँ ईमेल को माध्यम बाट हाम्रो ग्राहक सेवा द्वारा प्रदान लि links्कहरु लाई सीधा जाँदै कुनै पनी समयमा तपाइँको आदेश को स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाइँ अर्डर स्थिति ट्र्याक गर्न को लागी अर्डर नम्बर र ईमेल ठेगाना हुनु पर्छ। हामी तपाइँलाई ट्र्याकि number नम्बर ईमेल गर्नेछौं। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि वाहक को वेबसाइट समय मा रेकर्ड र पार्सल स्थिति अपडेट गर्न सक्दैन।
के तपाइँको सबै सामान स्टक मा छ?
सामान्यतया, वेबसाइट मा सूचीबद्ध हाम्रा सबै वस्तुहरु उपलब्ध छन्। तर कहिलेकाहीँ केहि वस्तुहरु कडा माग को कारण अर्डर बाहिर हुन सक्छ। यदि तपाइँ एक आइटम उठाउनुहुन्छ र यसको लागी तिर्नु हुन्छ, तर कुनै पनि कारण को लागी यो उपलब्ध छैन, हामी तपाइँलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं, वा या त तपाइँ अन्य समान आइटम छनौट गर्न वा तपाइँको खातामा तुरुन्तै फिर्ता प्रक्रिया गर्न सुझाव दिन्छौं।